Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir ” Carruurta waa in loo helaan Xabsi aan aheyn kan dadka waaweyn lagu xiro – Radio Baidoa
Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir Muuse Macalin Maxamed oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu maamuusayay maalinta aas-aaska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in xabsiyada dalka qaarkood lagu arko carruur da’yar oo la xiran dad ka da’weyn.
”Carruurtu waxey geystaan mar marka qaar fal danbiyeedyo la mid kuwa ay geystaan dadka waaweyn, sidaa daradeed waa in loo helaa xabsiyo u gaar ah, ma’aha in Ilo yar oo 18 sano jir ah lagu dhax hayo dad ka da’weyn oo qaarkood galay faldanbiyeedyo ay ka mid yihiin dil iyo wixii la mid ah ” ayuu yiri guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir.
Wuxuu sheegay in carruurtaan danbiyada loo xiro marmarka qaar isla xabsiga dhaxdiisa uu kala kulmo dacadi uga imanaya dadka lala xiray, waana arin u baahan ayuu yiri in laga garaabo.
”Waxaan codsaneynaa Wasaarradda Cadaallada, Taliska Asluubta, Guddiga Cadaallada ugu xil saaran Baarlamaanka Soomaaliya, waa in leyska uruuriyaa dhaqaale Carruurta loogu dhiso ugu yaraan Labo Qol oo u gaar ah si halkaa loogu xabiso lagana dhax saaro dadka waaweyn;” ayuu yiri guddoomiyaha.
Waa markii ugu horreysay oo arintan laga hadlo iyado xitaa marka la eego Xabsiga dhexe ee dalka la arki karo in ay ku xiran yihiin Carruur qaarkood da’doodu ka heyso 18 sano kuwaa oo qaarkood loo keeno dhaqan celin.
7 qof oo ku dhintay dhul giriir ku dhuftay dalka Turkiga